५ जना महिलाद्धारा बलात्कारको शिकार भएका पुरुषको दुःखद निधन ! - Nepal's Online News
काठमाडौं – नेपालीमा एउटा उखान छ दुई जोईको पोई कुना बसि रोई ! आज पनि धनसम्पतीको बलमा बहुविावाह गर्ने प्रचलन गरेको छ । कानुनी रुपमा बहुविवाह गर्नु अपराध भएके भएपनि धेरैं ठाउँहरुमा यस्तो समस्या रहँदैं आएको छ । यसैं विवाहलाई लिएर अफ्रिकामा एक अनौठो घटना घटेको छ । अफ्रिका महाद्वीपको नाइजेरियामा यस्तो घटना सुनियोत्योमा घटेको हो । नेपालमा हामिले पतीले पत्नीमाथि अत्याचार गर्ने गरेको सुन्दै आइरहेका छौ ।
नाइजेरियामा भएको यो घटनामा पत्नि पिडित नभएर पति पिडित भएका छन् । ती पीडित पुरुष नाइजेरियाका युरोको ओनोजा हुन् । जो अब यो संसारमा छैनन् । नाइजेरियाको बिनेयू युरोको एक करोडपति व्यापारी थिए । उनले ६ श्रीमती विवाह गरेपछी जीवनमा सबै कुरा ठिकठाक चलिरहेको थियो । तर उनले ६ वटा विवाह गरेपछि सबै श्रीमतीलाई बराबर समय दिन नसकेपछि श्रीमतीहरु उनीसँग रुष्ट थिए ।
युरोको यस्तो व्यवहार बाँकी पाँच जना श्रीमतीलाई मन परेको थिएन । त्यसैले पाँच जना श्रीमती मिलेर युरोलाई त्यतिबेलासम्म बलात्कार गरे जतिबेला सम्म उनको निधन भएन । युरोको बलात्कार गरेर हत्या गर्ने पाँच श्रीमतीका अनुसार छैटौं विवाहपछि उनले बाँकी पाँच जना श्रीमतीलाई समय दिएका थिएनन् र उनीहरुको इच्छा र चाहनालाई पूरा गर्न सकेका थिएनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमका अनुसार युरो आफ्नी छैटौं श्रीमतीसँग यौन सम्बन्ध बनाइ रहेका थिए । त्यति नै बेला अन्य पाँच जना श्रीमती उनको कोठामा पुगे । पाँच जना श्रीमतीले पनि आफूलाई पनि पालैपाले यौन सम्पर्क गर्न निर्देशन दिए जसका कारण पाँचै जना श्रीमतीसँग यौन सम्पर्क गर्नु उनको बाध्यता भयो । किनभने उनीहरुसँग चक्कु, छुरा र अन्य हतियार पनि थियो ।
क्रुर श्रीमतीको दबावमा उनले पालैपाले यौन सम्पर्क गर्न थाले । चार श्रीमतीसँग यौन सम्पर्क गरेपछि पाँचौं श्रीमतीसँग यौन सम्पर्क राख्दा राख्दै उनको निधन भयो । श्रीमानको निधनपछि पाँचै जना श्रीमती फरार भए । प्रहरीले युरोका दुई श्रीमतीलाई पक्राउ गरेको छ भने अन्य चार जना अहिले पनि फरार रहेको जनाएको छ । एजेन्सी